लन्डनमा मोदी भागेको क्षण – Gulmiews
लन्डनमा मोदी भागेको क्षण
१ मंसिर २०७२, मंगलवार २१:५७ Sanju Kauchha
“उ उतैबाट निस्कियो”, बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवास डाउनिंग स्ट्रीटको कालो फलामे गेट भित्र पत्रकार हरुको टोलि दौडिएको देख्ना साथ प्रदर्शनकारीको बीचबाटै कोहि चिच्यायो । घन्टौ देखिको नारावाजीमा घांटी सुकाएका नेपालीहरुको नारावाजी फेरी चर्कियो । सयौ मान्छेको एक स्वरको आवाजले कम्पन पैदा भएजस्तो सुनिन्थ्यो । व्यापक मेडिया कभरेजले गर्दा सांझ सम्म यो बिरोधको समाचार संसारमा फैलिने त् पक्का थियो तर बिरोधका सहभागीहरु यो बिरोधको नजर र आवाज मोदीको आँखा र कान सम्म पुगोस भन्नेमा केन्द्रित थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणको क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने र त्यहाँ बाट बेलयाती संसदमा सम्बोधन गर्न जानको लागी प्रदर्शन र सुरक्षाको कारण देखाउदै अगाडीको मुख्य प्रवेश द्वारको प्रयोग नगरेर ब्याक इन्ट्रान्स बाट प्रवन्ध मिलाईएको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा मोदीलाई चोर बाटो बाट भगाईएको थियो ! बिरोधमा उत्रिएका नेपालीहरु संगको भेट लाई छलेर उनि भागेका थिए ।
लण्डनमा मोदी बिरुद्द प्रदर्शन गर्दै । तस्बिर: अर्जुन गौतममोदिसंग आमने सामने हुन आतुर नेपाली हरु संसद भवन तर्फ लम्कीए । संसद भवन तर्फ जाँदा खाली बाटोमा नारा घन्काउदै हिडेको दृश्य कम रोचक थिएन । बाई पासर्स हरुको पनि जुलुस तर्फ रुचिपूर्ण ध्यानाकर्षण भएको थियो । पार्लियामेन्ट स्क्यायरमा महात्मा गान्धीको शालिकमा फुल चढाउने बेलामा केहि मिटर परको नेपालीहरुको नारावाजी सुन्दिन भने पनि मोदीको कानमा नपर्ने कुरै थिएन । प्रधानमन्त्री निवास बाट छलाएर यता ल्याईएका मोदीलाई याँहानिर प्रदर्शनकारी हरुले आफ्नो शक्ति देखाउन सफल भएका थिए ।
पार्लियामेन्ट स्क्वायारको दुई तर्फी बाटो बन्द गरिएको थियो । सामान्यतया देशी बिदेशी राष्ट्र प्रमुखको भ्रमणमा पत्तै नपाईने लन्डन सेन्टरको बाटो बन्द गर्नुको कारण मोदी बिरुद्दको प्रदर्शन नै थियो । प्रदर्शन कारीको उपस्थिति लाई मध्यनजर गर्दै लन्डनको प्रमुख ठाउको मुख्य सडक बन्द गरिएको थियो । आयोजक हरुले मेट्रोपोलिटन पुलिस लाई कायक्रम बारे खबर गरिसकेका थिए । बेलायति प्रधानमन्त्रिको कार्यालयको ठिक अगाडीको स्थान हाम्रो बिरोधको लागी छुट्याईएको थियो ।
यतिन्जेल लन्डनको सिंह दरवार एरिया टुडिखेल मय भईसकेको थियो । मोदीको बिरुद्दको प्रदर्शनको सोही ठाऊमा भारतीय हरुकै ठुलो उपस्थितिले हामीमा थप उर्जा प्रदान गरेको थियो । भारतकै सिख तथा अन्य एथनिक माईनरिटीका मान्छेहरु मोदी बिरुद्द बौलाए जस्ता देखिन्थे । उनीहरु पनि बगलमा संग संगै उपस्थित हुनाले हामीलाई ठुलो देखाउन भूमिका अवश्य खेलेको थियो । नाराहरुमा नेपालीहरु कुर्लिएकै थिए । “ ब्याक अफ मोदी/ इन्डीया !, रेस्पेक्ट नेपाल, फ्रिडम अफ ट्रान्जिट ! आदी इत्यादी ।कसैले त घरि घरी मुर्दावाद पनि भनेका थिए ! प्राय सबैको हातमा नेपालमा मानवीय संकट निम्त्याउने भारतीय नाकावन्दीको बिरोधका शब्दहरु लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर हरु थिए ।
बिबिसी, स्काई, सीएनएन तथा हिन्दी, उर्दु लगायतका टिभी च्यानलका रिपोर्टर हरुले प्रदर्शनलाई फोकस गरेर खिचिरहेका देखिन्थे । नेपाली पत्रकारहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कसले के लेख्यो भनेर नारावाजिकै बिचमा पनि कोही मोबाईल ब्राउज गर्दै देखिन्थे । अन्तर्राष्ट्रिय मेडियाहरुले कमसेकम यो बिरोधलाई हेडलाइन न्युजमा हाइलाइट गर्दै मेन्सन गरेका छन । यसलाई ठुलै उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ । लिडिंग ईंग्लिश न्युजपेपरका प्रिन्ट तथा अनलाईन संस्करण हरुमा यो प्रसंगलाई ब्यापक रुपमा उठाईएको छ ।
केहि दिन पहिले बाट बिरोध प्रदर्शनको आयोजनाको प्रचार प्रसारको अभियान सामाजिक संजाल बाटै चलेको थियो । गणेश खडका, एभरेस्ट गौतम लगायतका युवाहरुले शुरु गरेको अभियानमा एन आर एन युके लगायत दर्जनौ नेपाली संघ संस्थाहरुले उतिखेरै ऐकवद्दता जनाएर बेलायतवासी नेपालीहरु लाई बिरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आवहान गरेका थिए । कार्यक्रमको एक मात्र उद्देश्य भारतीय नाकावन्दीको बिरोध गर्नु थियो ।
कार्यक्रमको आयोजना र यस भित्रको राजनैतिक धुर्विकरणमा प्राय विभाजित देखिने बेलायति नेपालीहरुलाई भारतीय नाकावन्दीले यस पटक एकै ठाउँमा उभ्याई दिएको थियो । सामाजिक आगुवा मात्र नभएर बिरलै यस्ता प्रोग्राममा हिडने युवाहरु पनि सह्भागी देखिन्थे । नेपालमा भूकम्प आउदा होस अथवा नाकावन्दी खेप्दा होस् देशलाई दुख्दा संसारमा रहेका सबै नेपालीको मन दुख्छ भन्ने कुरा पुन छर्लंग पारिदिएका छन बेलायति नेपालीहरुले यसपाली ।
“नारावाजी गर्दै गर्दा मेरो त घरी घरी छाती ढक्क फुलेर चण्डिका रौ ठाडा भएर आँखा समेत रसाए ”, एकजना सहभागीले कार्यक्रम पछी भन्दै थिए । हुनपनि सहभागीहरु राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत नै देखिन्थे । बेलायत तिर सामान्यतया हुने बिरोध प्रदर्शनमा सहभागीता निकै कम हुने गर्छ । एकाध दर्जन मान्छेहरुले प्लेकार्ड ब्यानर देखाउने, धर्ना गर्नु लाई नै बिरोधको स्वरुपमा बुझिने ठाउमा झन्डै एक हजारको हाराहारीमा उपस्थित नेपालीहरुले अत्यन्तै सभ्य र संगठित तरिकाले प्रभावकारी प्रदर्शन गरेर भारतीय ज्यादतिको अन्तरास्ट्रियकरणमा भूमिका खेलेका छन ।
भारतीय सरकार र मोदी स्वयमलाई यो बिरोध आफैमा एउटा ठुलो ह्यूमिलिएशन थियो । उनीहरु पनि यो स्केलमा प्रोटेस्ट हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन भन्ने कुरा भारतीय प्रधान मन्त्रीको कार्यालयले बेलायती समाजमा नेपालीको प्रभाव बारेको रिपोर्ट मागे बाटै प्रमाणित हुन्छ । डेभिड क्यामरुन र नरेन्द्र मोदीको संयुक्त बक्तव्यमा नेपाल बिषयले प्रवेश पाउनु भनेको पनि आवाज सुनिएको छ भन्ने जनाऊ हो । भलै बेलायतले इन्डिया संग दश बिलियन पाउण्डको ट्रेड डिल साइन गर्दै गर्दा नेपाल प्रति भारतीय कदमको बेलायत सरकार बाट सिधा बिरोध आउने त कुरै भएन । बक्तव्यमा भारतीय चासोलाई बढी जोड दिदै सम्बोधन दिशा औल्याउनु स्वाभाविकै थियो । तर यहि बिषयले बेलायतिको उपल्लो सदनमा समेत प्रवेश पाइसकेको परिप्रेक्षमा यो मुद्दा राइट पोइन्टमा पुगिसकेको छ । परन्तु आगामी दिनमा यसको फलो अपमा भने नेपाली डायस्पोरा खास गरेर एन आर एनले नै यसलाई अभियानको रुपमा अघी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
आफ्नै देशका समस्यामा गाँजिएको, बिहार निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय बेहोरेको मोदी सरकारले नेपाललाई गरेको व्यवहारको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना शुरु भएको छ । भारत सरकारलाई पर्न जाने चौतर्फी दवावले नेपालको हितमा काम गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । परन्तु नेपाल भारत सम्बन्धमा यो बिरोधले अरु पर्सनल तिक्तता थप्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । एक जना सहभागीको भनाईमा आफ्नै आँखा अगाडीको यो चर्को विरोधले मोदीलाई थप चिढाउने सम्भावना लाई नकार्न भने सकिदैन । “ अस्तित्वमा रहेर बिकराल बन्दै गरेको देशको समस्यालाई लुकाएर किन बस्ने, दुख पाएको कुरा कमसेकम दुनियाले त थाहा पाओस , किन र कसले गर्दा यस्तो भएको छ भनेर “, कार्यक्रम पछिको कफी गफमा एक जना नेपालीले भन्दै थिए ।
देश ,मधेशको समस्यामा सरकार गम्भीर भएर लाग्न ढिला गरेको छ , राष्ट्रियताको भाषणले मात्र नेपालीको जीवन चल्दैन भन्ने जनताले भन्दा सरकारले बढी बुझ्नु पर्ने कुरा हो । गर्न सकिने सिमा सम्म पुगेर सम्बोधन गरियोस जायज मागहरु , स्वदेशको निकास देशमै निस्कोस, निकासका हरेक प्रयत्नमा सरकार लागोस भन्नेमै छन गैर आवासीय नेपालीहरु पनि ! बिरोध मधेशको होइन भारतको गरेका हुन बेलायतमा नेपालीहरुले ! Comments comments	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	दलित समुदायबाट सिडियो बनेका बिश्वकर्मा अमेरिकामा सम्मानित